01 / 01 / 2021 07 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 3414 Views စာ0မှတ်ချက် 10278 ရဲစခန်း, 10280 ပန်းပန်းစည်း, 10281 Bonsai သစ်ပင်, 10941 Mickey နှင့် Minnie မွေးနေ့ရထား, 2021, 31111 ဆိုက်ဘာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, 31112 တောရိုင်းခြင်္သေ့, 31113 လူမျိုးကား Transporter, ၃၁၁၁၄ Superbike, 31118 Surfer သဲသောင်ပြင်အိမ်, 31201 ဟယ်ရီပေါ်တာ Hogwartမောက်စ်, 31202 DisneyMickey မောက်စ်, 40440 ဂျာမန်သိုးထိန်း, 40441 Shorthair ကြောင်, 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 40466 တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပန်ဒါ, 40468 အဝါရောင်တက္ကစီ, ၄၀၄၆၉ Tuk Tuk, 41439 ကြောင်ဖြုန်းတီးသောကား, 41443 Olivia ၏လျှပ်စစ်ကား, 41444 သူartအင်းအိုင် City အော်ဂဲနစ်ကဖေး, 41447 သူartအင်းအိုင် City ပန်းခြံ, 41448 သူartအင်းအိုင် City ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်ရုံ, 41449 Andrea ၏မိသားစုအိမ်, 41662 Olivia ရဲ့ Flamingo Cube, 41663 မင်းသမီး Emma ရဲ့ Dalmatiana Cube, 41664 Mia ရဲ့ Pug Cube, 41665 Stephanie ရဲ့ကြောင် Cube, 41666 Andrea ရဲ့ Bunny Cube, 41691 Doggy နေ့စောင့်ရှောက်မှု, 41692 Vet ဆေးခန်းကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်, 41909 မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း Vibes လက်ကောက်, 41910 Ice Cream Besties လက်ကောက်, 41918 စွန့်စားမှုလက်ကောက်, 41921 E ကိုxtra DOTS စီးရီး 3, 41923 နဂါးလက်ကောက်, 41924 လျှို့ဝှက်ချက်ကိုင်ဆောင်သူ, 41925 လျှို့ဝှက်သေတ္တာများ, 41926 ကို Creative P ကိုarty Kit, 41934 Starlight လက်ကောက်, 42116 Skid စတီယာရင် Loader ကို, 42117 လူမျိုးလေယာဉ်, 42118 နဂါး Jam သင်္ချိုင်းတွင်းတူး, 42119 နဂါး Jam Max-D ကို, ၄၂၁၂၂ Jeep Wrangler, ၄၂၁၂၃ McLaren Senna GTR, 42124 Off- လမ်း Buggy, 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51, 43186 အဆိုပါ Salamander Buildable ဇာတ်ကောင် Bruni, 43189 အဲလ်ဆာနှင့် Nokk ပုံပြင်စာအုပ်စွန့်စားမှု, 43191 Ariel ရဲ့ပွဲလှေ, 43192 စင်ဒရဲလား၏တော်ဝင်ရထား, 60275 ရဲတပ်ဖွဲ့ရဟတ်ယာဉ်, 60276 ရဲအကျဉ်းသားပို့ဆောင်ရေး, 60277 ရဲကင်းလှည့်လှေ, 60279 မီးဘေးအန္တရာယ်ထရပ်ကား, 60280 မီးသတ်လှေကား, 60281 မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်, 60282 မီးသတ်စစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်, 60283 အားလပ်ရက် camper ဗန်, 60284 Roadwork Truck ကား, 60285 အားကစားကား, 60286 သဲသောင်ပြင်ကယ်ဆယ်ရေး ATV, 60287 ထွန်စက်, 60288 လူမျိုး Buggy Transporter, 60289 Airshow ဂျက် Transporter, 60290 စကိတ်စီးခြင်းပန်းခြံ, 60291 မိသားစုအိမ်, 60292 မြို့စင်တာ, 60304 လမ်းမကြီးပြား, 60305 ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, 60306 စျေးဝယ်လမ်း, အသက် 71029 စီးရီး 21, 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ, 71381 Chain Chomp တောတွင်းကြုံတွေ့တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71382 Piranha Plant Puzzling Challenge တိုးချဲ့ခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း, 71383 Wiggler ၏အဆိပ် Swamp တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71384 Penguini Mario ပါဝါ Up-Pack ကို, 71385 Tanooki Mario ပါဝါ Up-Pack ကို, 71386 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 2, 71730 Epic Battle Set Kai vs Kai, 71731 Epic Battle သတ်မှတ် Zane Nindroid, 71732 Epic Battle Set ဂျေး Serpentine, ဝိညာဉ် vs. 71733 Epic Battle Set ကိုကိုးလ်, Element တွေကို၏ 71735 ပြိုင်ပွဲ, 71736 ကျောက်သား Blaster, 71737 Ninjago X1 Ninja အားသွင်းကိရိယာ, 71738 Zane ရဲ့ Titan Mech တိုက်ပွဲ, 71742 Overlord နဂါး, 75295 ထောင်စုနှစ် Falcon Microfighter, Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ, 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်, 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, 76168 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက် Mech လက်နက်, 76169 Thor Mech သံချပ်ကာ, 76171 မိုင် Morales Mech သံချပ်ကာ, 76172 Spider-Man နှင့် Sandman Showdown, 76173 Spider-Man နှင့် Carnage vs. Ghost Rider, 76174 Spider-ManMysterio vs. 's Monster Truck ကား, ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစာသင်ခန်းနှင့်အတူ 76382 ဖတ်စာအုပ်, Potions စာသင်ခန်းနှင့်အတူ 76383 ဖတ်စာအုပ်, Herbology စာသင်ခန်းနှင့်အတူ 76384 ဖတ်စာအုပ်, Charms စာသင်ခန်းနှင့်အတူ 76385 ဖတ်စာအုပ်, Nian ၏ 80106 ပုံပြင်, 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော်, art, Batman, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, BrickHeadz, တရုတ်နှစ်သစ်ကူး, City, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဖန်ဆင်းရှင်, Disney, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Marvel, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, Ninjago, Star Wars, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ
အသစ်သောဒါဇင်ပေါင်းများစွာ Lego အစုံအလင်ပါ ၀ င်သည့်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသို့အစုံအလင်ပါ ၀ င်သည် Star Wars, Ninjago, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Friends နှင့် Marvelဒါဆိုငါတို့အားလုံးကိုစာရင်းတစ်ခုထဲကိုစုထားလိုက်ပြီ။
အစဉ်အမြဲရှိပြီးအမြဲဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်, ဇန်နဝါရီလ 1 အသစ်သောပကတိကြွယ်ဝမှု၏စတင်ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည် Lego အားလုံးသင့်ရဲ့ Hard- ရရှိခဲ့သည်ငွေသားပြီးနောက်။ တဖန်သင်တို့ p မှပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်art ၎င်းသည်တောက်ပပြီးအသစ်တစ်ခုအတွက်သာမကအခြားထူးဆန်းသောနှစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့်ဇန်နဝါရီလအပြာရောင်ကိုကုသရန်လည်းဖြစ်သည်။
သင်ဘာကိုကြည့်ရမည်ကိုအတိအကျမသိလျှင် LEGO.comသို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့အတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ယနေ့တွင်စတင်ခဲ့သောအရာအားလုံး၏စာရင်းနှင့်အတူတက်လာသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရှည်လျားတဲ့စာရင်းပါ၊ ဒါကြောင့်မင်းက ap ရှာနေမယ်ဆိုရင်articular အခင်းအကျင်း, သင့်ရဲ့ browser ကိုသို့မဟုတ်စက်ရဲ့ find function ကိုသုံးပါကဖြောင့် ဦး တည်။
Mosaic Theme သည် ၂၀၂၁ တွင်အသစ်စက်စက်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းသစ်နှစ်မျိုးဖြင့်ပြန်လာသည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Disney.
31201 ဟယ်ရီပေါ်တာ Hogwartမောက်စ်
31202 DisneyMickey မောက်စ်
တစ်ခုတည်း Lego Batman 2021 ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက် (ယခုအချိန်အထိ) ကို Caped ခရူးဆိတ်စစ်တပ်အတွက်အသစ်စက်စက်မတ်မတ်နှင့်အတူ minifigure - လေးလံဆက်စပ်ပစ္စည်း pack ကိုဖြစ်ပါတယ်။
40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs.
ဤရွေ့ကားအသစ် 18+ အစုံစုံလင်သောပလပ်စတစ်အိမ်အလှဆင်ဘို့ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထွက်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.
10281 Bonsai သစ်ပင်
အဆိုပါ statuette ဆောင်ပုဒ်အသစ်တခုနှင့်အတူယခုနှစ်ကွဲပြားခြားနားသည် BrickHeadz အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကြီးထွားလာသောတရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
40441 Shorthair ကြောင်
အဆိုပါ Lego အုပ်စု၏တရုတ်သမိုင်းနှင့်ဒဏ္myာရီသို့လူကြိုက်များသောလေ့လာရေးခရီးနှစ်ခုနှင့်အတူဆက်လက် အသစ်အစုံ.
Nian ၏ 80106 ပုံပြင်
80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော်
အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းပြား system ကိုများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသစ်သော ဦး တည်ချက်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် Lego CITYအရပ်သားဘ ၀ သို့အကြီးအကျယ်မှီခိုနေရသည်။
60283 အားလပ်ရက် camper ဗန်
60284 Roadwork Truck ကား
60286 သဲသောင်ပြင်ကယ်ဆယ်ရေး ATV
60288 လူမျိုး Buggy Transporter
၏နောက်ဆုံးပေါ်စီးရီး စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဇာတ်ကောင် ၁၆ ယောက်မှ ၁၂ ယောက်အထိပြန်ပေါင်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အလွန်ချိုသောတစ်ဒါဇင်ဖြစ်သည်။
အသက် 71029 စီးရီး 21
မကြာခဏသတိမမူမိသော 3-in-1 ဆောင်ပုဒ်သည် ၂၀၂၁ အတွက်တိရစ္ဆာန်၊
31113 လူမျိုးကား Transporter
31118 Surfer သဲသောင်ပြင်အိမ်
၄၀၄၆၉ Tuk Tuk
Disney အသစ်နှင့်အဟောင်းဂုဏ်သတ္တိများစင်ဒရဲလားကနေအေးစက်နေတဲ့ 2021 မှ2ခုနှစ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့တက်ကြသည်။
43186 အဆိုပါ Salamander Buildable ဇာတ်ကောင် Bruni
43189 အဲလ်ဆာနှင့် Nokk ပုံပြင်စာအုပ်စွန့်စားမှု
43191 Ariel ရဲ့ပွဲလှေ
10941 Mickey & Minnie မွေးနေ့ရထား
41909 မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း Vibes လက်ကောက်
41910 Ice Cream Besties လက်ကောက်
41926 ကို Creative P ကိုarty Kit
41934 Starlight လက်ကောက်
အဆိုပါ Friends သူနေစဉ်လျှပ်စစ်ကားနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အစိမ်းရောင်သွားနေကြသည်artအင်းအိုင် Cityနိုင်ငံသားတွေဟာရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်တယ်။ ကံကောင်းပါစေ။
41666 Andrea ရဲ့ Bunny Cube
41665 Stephanie ရဲ့ကြောင် Cube
41664 Mia ရဲ့ Pug Cube
41663 မင်းသမီး Emma ရဲ့ Dalmatiana Cube
41662 Olivia ရဲ့ Flamingo Cube
41443 Olivia ၏လျှပ်စစ်ကား
41444 သူartအင်းအိုင် City အော်ဂဲနစ်ကဖေး
41447 သူartအင်းအိုင် City ပန်းခြံ
41448 သူartအင်းအိုင် City ရုပ်ရှင်ရုံ
41449 Andrea ၏မိသားစုအိမ်
41691 Doggy နေ့စောင့်ရှောက်မှု
41692 Vet ဆေးခန်းကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်
တည်ဆောက်နိုင်သောစာသင်ခန်းလေးခန်းသည် Wizarding World အကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိနေသည်။ သူတို့ကနှစ်စဉ် Hogw နှင့်အတူစကေးမဟုတ်ပါဘူးartဒါပေမဲ့သူတို့ဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရမ်းကောင်းတာပဲ။
Spider-Man ဒီနှစ်အများစုအတွက်စင်တာဇာတ်စင်ကြာပါသည် Marvel ယခုအချိန်အထိဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းငါတို့အားလုံးသည် Miles Morales Mech Armor အသေးစားဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
76168 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက် Mech လက်နက်
76169 Thor Mech သံချပ်ကာ
76171 မိုင် Morales Mech သံချပ်ကာ
76172 Spider-Man နှင့် Sandman Showdown
76173 Spider-Man နှင့် Carnage vs. Ghost Rider
76174 Spider-ManMysterio vs. 's Monster Truck ကား
Lego Modular အဆောက်အ ဦး များစုဆောင်းခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ် modular အဆောက်အ ဦး တစ်ခုတတ်၏ Lego CITY 18+ အကွာအဝေးမှအဓိက - နှင့်စတိုင်အတွက်ဒါပါဘူး။ ဒီတစ်ခုကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
၏ပထမ ဦး ဆုံးအသုတ် Lego Ninjago 2021 အတွက်အစုံအသစ်တစ်ခုကို Legacy အကွာအဝေးနှင့်အတူအတိတ်ကနေအများအပြားပေါက်ကွဲမှုတက်ကိုဆက်ကပ်။
71730 Epic Battle Set - ကူ vs. Skulkin
71731 Epic Battle Set - Zane vs. Nindroid
71732 Epic Battle Set - ဂျေ vs. မြွေ
71733 Epic Battle Set - ဝိညာဉ်တော် Warrior vs. ကိုးလ်
Element တွေကို၏ 71735 ပြိုင်ပွဲ
71736 ကျောက်သား Blaster
71737 X-1 Ninja အားသွင်း
71738 Zane ရဲ့ Titan Mech တိုက်ပွဲ
71742 Overlord နဂါး
ဘို့လေးခုအစုံ Star Wars ယခုအချိန်ထိအနည်းဆုံးသုံးခုလောက်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော X-wing နှင့် TIE Fighter နှင့် Beskar Mando တို့ပါဝင်သည်။
75295 ထောင်စုနှစ် Falcon Microfighter
Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ
75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်
75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-wing တိုက်လေယာဉ်
အဲဒါကျွန်တော့် Lego Mario! ဒီဂျစ်တယ်ပုံမှာရန်သူများ၊ ထောင်ချောက်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များပင်ထပ်မံရောက်ရှိလာသည်။
စူပါကားများနှင့်ဂျစ်ကားများမှသည်နဂါးထရပ်ကားများနှင့်စက်ယန္တရားများအထိ၊ နည်းပညာ 2021 ခုနှစ်တွင်ဘီး -y ကိုကောင်းသောရှာဖွေနေသည်။ (ငါတို့အင်္ကျီရလိမ့်မယ်။ )
42116 Skid စတီယာရင် Loader ကို
42118 နဂါး Jam သင်္ချိုင်းတွင်းတူး
၄၂၁၂၂ Jeep Wrangler
၄၂၁၂၃ McLaren Senna GTR
42124 Off- လမ်း Buggy
42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51
← ငါးအဖိုးတန်ဆုံး LEGO modular အဆောက်အ ဦး များ
Lego တိုင်း Star Wars 2021 ဇန်နဝါရီလ 1 ကနေရရှိနိုင် set →